Khalid Mishaal oo 45 sano kadib kusoo laabtay Falastiin
Home Somali News Khalid Mishaal oo 45 sano kadib kusoo laabtay Falastiin
Khalid Mishaal oo ah hogaamiyaha ugu sareeya ee ururka Xamaas ee reer Falastiin ayaa maanta oo Jimce ah markii ugu horeysay yimid Marinka Gaza, asagoo muddo 45 sano ah ka maqnaa dhulka Falastiin.
Khalid Mishaal ayaa dhulka Falastiin iga tagay markii uu ahaa 11 sano jir, wuxuuna markii ugu horeysay booqasho ku yimid Marinka Gaza oo maanta iyo beri lagu qabanayo banaanbax lagu xusayo Aasaaskii ururka Xamaas oo u dabaal dagaya 25 guuradii dhismaha dhaq dhaqaasi reer Falastiin.
Khalid Mishaal ayaa in muddo ah ku noolaa dalka Siiriya, balse sanadkii lasoo dhaafay kadib markii ay dagaalada ka bilowdeen wadanka Siiriya, ayuu u guuray dhanka Boqortooyada Qatar oo uu hada degen yahay.
Xaaska Khalid Mishaal ayaa ayadu xalay gaartay magaalada Gaza, ayadoo ninkeeda kala qeyb qaadan doonta debaal dega ururka Xamaas uu qaban doono maalinimada beri ah (Sabti).
Booqashada Khalid Mishaal ee Gaza ayaa lagu wadaa inay qaadato laba maalmood oo kaliya.
Hogaamiyaha Ururka Xamaas ayaa ku dhiiraday inuu tago dhulka Falastiin kadib xabad joojintii bishii lasoo dhaafay la dhex dhigay Isra’iil iyo Xamaas. Kadib dagaalkii iyo duqeymihii socday sideeda maalmood.
Sidoo kale Hogaamiyaha ururka Jihaadiga ah ee (Islamic Jihad) Mr.Ramadan Shallah oo asaguna dhulka Falastiin in muddo ah ka maqan ayaa sheegay inuu tagi doono Gaza, balse warar soo baxaya ayaa sheegaya in Ramadan Shallah loo diiday inuu asagu tago Gaza, kadib markii Isra’iil ay ka horjoogsatay booqashadiisa Gaza.
Mas’uuliyiinta wadanka Masar oo ah goobta uu joogo Ramadan Shallah ayaa u sheegay in aysan suurtogal noqon doonin inuu hogaamiyahaasi Islamic Jihad uu tago dhulka Falastiin.